ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၃၅) အတွက် ပေါလ်မာဆွန် နှင့် လော်ရိုတို့ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များ – Myan Ball
ပရီးမီးယားလိဂ်ခရီးရှည်ကြီးဟာ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ ၄ ပွဲသာကျန်ပါတော့တယ်။ အမှတ်ပေးဇယားထိပ်မှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဆီးမီးဖိုင်နယ်တက်ရောက်ခဲ့သော လီဗာပူးအသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ရသော ဒုတိယနေရာမှ မန်စီးတီးအသင်းထက် တစ်ပွဲပိုကစားထားပြီး ၂ မှတ်ဖြတ်ဦးဆောင်ထားပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက် အဆင့် ၄ အတွင်းဝင်ရောက်ရေးတိုက်ပွဲတွင်လည်း အဆင့် ၃ နေရာမှ အဆင့် ၆ နေရာအတွင်း ၃ မှတ်သာ ကွာဟနေပြီး စပါးက အဆင့် ၃ အာဆင်နယ်က အဆင့် ၄ ၊ ချဲလ်ဆီးက အဆင့် ၅ နှင့် မန်ယူအသင်းတို့က အဆင့် ၆ နေရာတွင်ရပ်တည်နေပြီး အမှားမခံနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဆင်းဇုန်းတွင် ဟက်ဒါဖီးလ် နှင့် ဖူဟမ်အသင်းတို့က တန်းဆင်းရဖို့ သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ပရီးမီးယားလိဂ်ဟာ ရာသီကုန်အထိ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ရှိနေပြီး ယခုတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်များအတွက် စကိုင်းစပေါ့ နှင့် ဘီဘီစီတို့က ဘောလုံးရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသော ပေါလ်မာဆွန် နှင့် လော်ရိုးတို့ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်များကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်….
မန်စီးတီး (၃-၀) စပါး
ဘုန်းမောက် (၃-၁) ဖူလ်ဟမ်
ဟက်ဒါဖီးလ် (၀-၂) ၀က်ဖို့ဒ်
၀က်စ်ဟမ်း (၁-၃) လက်စတာ
၀ုဗ်ဗာဟမ်တန် (၃-၀) ဘရိုက်တန်
နယူးကာဆယ် (၂-၂) ဆောက်သမ်တန်
အဲဗာတန် (၁-၁) မန်ယူ
အာဆင်နယ် (၃-၁) ပဲလေ့စ်
ကာဒစ်ဖ် (၀-၂) လီဗာပူး
ချဲလ်ဆီး (၃-၀) ဘန်လေ
မန်စီးတီး (၂-၀) စပါး
ဘုန်းမောက် (၃-၀) ဖူလ်ဟမ်
ဟက်ဒါဖီးလ် (၁-၁) ၀က်ဖို့ဒ်
၀က်စ်ဟမ်း (၂-၁) လက်စတာ
၀ုဗ်ဗာဟမ်တန် (၂-၀) ဘရိုက်တန်
နယူးကာဆယ် (၂-၁) ဆောက်သမ်တန်
အဲဗာတန် (၀-၂) မန်ယူ
အာဆင်နယ် (၂-၀) ပဲလေ့စ်
ချဲလ်ဆီး (၂-၀) ဘန်လေ
ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ (၃၅) အတှကျ ပေါလျမာဆှနျ နှငျ့ လျောရိုတို့ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြမြား
ပရီးမီးယားလိဂျခရီးရှညျကွီးဟာ ပနျးတိုငျရောကျဖို့ ၄ ပှဲသာကနျြပါတော့တယျ။ အမှတျပေးဇယားထိပျမှာ ခနျြပီယံလိဂျဆီးမီးဖိုငျနယျတကျရောကျခဲ့သော လီဗာပူးအသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျမှ ထှကျခှာခဲ့ရသော ဒုတိယနရောမှ မနျစီးတီးအသငျးထကျ တဈပှဲပိုကစားထားပွီး ၂ မှတျဖွတျဦးဆောငျထားပါတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရရှိဖို့အတှကျ အဆငျ့ ၄ အတှငျးဝငျရောကျရေးတိုကျပှဲတှငျလညျး အဆငျ့ ၃ နရောမှ အဆငျ့ ၆ နရောအတှငျး ၃ မှတျသာ ကှာဟနပွေီး စပါးက အဆငျ့ ၃ အာဆငျနယျက အဆငျ့ ၄ ၊ ခြဲလျဆီးက အဆငျ့ ၅ နှငျ့ မနျယူအသငျးတို့က အဆငျ့ ၆ နရောတှငျရပျတညျနပွေီး အမှားမခံနိုငျတဲ့အနအေထားဖွဈပါတယျ။ တနျဆငျးဇုနျးတှငျ ဟကျဒါဖီးလျ နှငျ့ ဖူဟမျအသငျးတို့က တနျးဆငျးရဖို့ သခြောသလောကျရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲ ပရီးမီးယားလိဂျဟာ ရာသီကုနျအထိ စိတျလှုပျရှားဖှယျရာ ရှိနပွေီး ယခုတဈပတျပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျမြားအတှကျ စကိုငျးစပေါ့ နှငျ့ ဘီဘီစီတို့က ဘောလုံးရေးရာ ကြှမျးကငျြသူမြားဖွဈကွသော ပေါလျမာဆှနျ နှငျ့ လျောရိုးတို့ရဲ့ ခနျ့မှနျးခကျြမြားကွညျ့ရှုလိုကျကွရအောငျ….
မနျစီးတီး (၃-ဝ) စပါး
ဘုနျးမောကျ (၃-၁) ဖူလျဟမျ
ဟကျဒါဖီးလျ (ဝ-၂) ဝကျဖို့ဒျ
ဝကျဈဟမျး (၁-၃) လကျစတာ
ဝုဗျဗာဟမျတနျ (၃-ဝ) ဘရိုကျတနျ
နယူးကာဆယျ (၂-၂) ဆောကျသမျတနျ
အဲဗာတနျ (၁-၁) မနျယူ
အာဆငျနယျ (၃-၁) ပဲလစျေ့
ကာဒဈဖျ (ဝ-၂) လီဗာပူး
ခြဲလျဆီး (၃-ဝ) ဘနျလေ
မနျစီးတီး (၂-ဝ) စပါး
ဘုနျးမောကျ (၃-ဝ) ဖူလျဟမျ
ဟကျဒါဖီးလျ (၁-၁) ဝကျဖို့ဒျ
ဝကျဈဟမျး (၂-၁) လကျစတာ
ဝုဗျဗာဟမျတနျ (၂-ဝ) ဘရိုကျတနျ
နယူးကာဆယျ (၂-၁) ဆောကျသမျတနျ
အဲဗာတနျ (ဝ-၂) မနျယူ
အာဆငျနယျ (၂-ဝ) ပဲလစျေ့
ခြဲလျဆီး (၂-ဝ) ဘနျလေ
အဆင့် ၄ အတွင်းဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းဟာ မန်ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုဟု လင်ဂတ်ဝန်ခံပြောဆို